Tag: y | Martech Zone
Kushambadzira Kwenyika: Maitiro Ega Echizvarwa Akachinjisa Uye uye Anoshandisa Tekinoroji
Zvakajairika kwandiri kuti ndicheme pandinoona chimwe chinyorwa chichigunun'una Millennials kana kuita kumwe kushoropodza kwakaomarara. Nekudaro, pane kusahadzika kushoma hapana hutsika hwekuzvibata pakati pezvizvarwa nehukama hwavo nehunyanzvi Ini ndinofunga zvakachengeteka kutaura kuti, paavhareji, mazera ekare haazeze kutora foni uye kufonera mumwe munhu, ivo vadiki vanhu vachisvetukira kune meseji. Muchokwadi, isu tinotova nemutengi uyo
YouTube: Ndeipi yako Vhidhiyo Strategic Iko?
Svondo, July 16, 2017 Svondo, July 16, 2017 Douglas Karr
Isu tinogara takaisa pfungwa pazvikanganiso kana zvasvika kune vatengi vedu 'dhijitari rekushambadzira zano. Majini ekutsvaga haasi chete chiteshi chevemabhizimusi nevatengi kuti vawane mabrands avanotsvaga, iwo maalgorithms zvakare chiratidzo chakakurumbira chechiremera chechiratidzo pamhepo. Sezvo isu tichiongorora izvo zvirimo zvinotyaira kutarisa kune iyo brand, isu tinofananidza zvirimo pane yega yega nzvimbo yemukwikwidzi kuti tione kuti misiyano chii. Kazhinji, mumwe wevaya vanosiyanisa ndizvo